प्रधानमन्त्री क्रिकेट कपको उपाधि प्रदेश १ ले जित्यो::Hamro Koshi Awaj / awaz
प्रधानमन्त्री क्रिकेट कपको उपाधि प्रदेश १ ले जित्यो
धरान: प्रधानमन्त्री कप टी ट्वान्टी राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपधि प्रदेश नम्बर १ ले जितेको छ। एपिएफलाई ६ रनले हराउँदै प्रदेश नम्बर १ ले उपाधि जितेको हो। प्रदेश नम्बर १ ले दिएको १०६ रनको लक्ष्य पछ्याएको एपिएफले पूरा २० ओभर खैल्दै ७ विकेट जाँदा ९९ रन मात्र बनाउन सक्यो।
३० बलमा ३६ रन चाहिएको अवस्थामा बढेको एपिएफले अन्तिम ६ बलमा १३ रन बनाउनुपर्ने चुनौतीसम्म पुगेको थियो। जहाँ प्रदेश नम्बर १ ले सम्हालिएको बलिङ गर्दै उपाधि जितेको छ। उपाधिसँगै प्रदेश नम्बर १ ले पाँच लाख रुपैयाँ पाउनेछ।
एपिएफका लागि ज्योति पाण्डेले १५ बलमा १४ रन, इन्दु बर्माले ८ बलमा ७ रन, सरिता मगरले ५ बलमा ६ रन, सोनु खड्काले १ बलमा १ रन, ममता चौधरीले ४७ बलमा ३४ रन, करुणा भण्डारीले ३६ बलमा २६ रन बनाए। चोटमा रहेकी कप्तान सीता राना मगर पछिल्लो क्रममा ब्याटिङमा आएर ३ बलमा २ रन बनाइन्।
प्रदेश नम्बर १ का लागि रुबिना क्षेत्री र एलिशा खडियाले दुई–दुई साथै संगीता राईले एक विकेट लिइन्। दाङ लमहीस्थित देउखुरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको प्रदेश १ ले पूरा २० ओभर खेल्दै ४ विकेट गुमाएर १०५ रन बनाएको थियो। जसमा अप्सरी बेगमले ४५ बलमा ३४ रन साथै रुबिना क्षेत्रीले ३२ बलमा १८ रन बनाए। काजल श्रेष्ठले २६ बलमा अविजित २९ रन बनाइन्। एपिएफका लागि सीता राना मगरले तीन साथै करुणा भण्डारीले एक विकेट लिइन्।
शनिबार भएको सेमिफाइनलमा एपिएफले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ९ विकेटले हराएको थियो। प्रदेश नम्बर १ ले लुम्बिनी प्रदेशलाई १० विकेटले हराएको थियो। ८ टिम सहभागी प्रतियोगितामा गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश एक खेल नजिति बाहिरिएका थिए भने वागमती प्रदेश र प्रदेश नम्बर २ ले एक–एक खेल जितेका थिए।
नियन्त्रित लागूऔषध ब्राउनसुगर र ट्याब्लेटसहित चारजना पक्राउ
हात्तीको आक्रमणबाट विराटचोककी युवतीको मृत्यु
जाडोको न्यानो कपडा कम्वल वितरण
प्रदेश १ भरीको सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित
बराहक्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीको समिति
सुनसरीमा माइक्रो र मोटरसाइकल जुध्दा तीनजनाको मृत्यु
धरानमा ‘पान क्याफे’
धरानका मेयर तिलक राईको तलब-भत्ताले पत्रकारिता पुरस्कार कोष स्थापना
गणतन्त्र बचाउन किन नलाग्ने ?
३१ वर्षमा २६ जना प्रधानमन्त्री
सकारात्मक सोंच कसरी बनाउने ?
धरानमा माग्नेको ‘रेट’ ले हैरान !
धनकुटाको छिन्ताङदेवी: दर्शन गर्नुभयो ?
दुर्घटनामा धरान-१० का युवाको मृत्यु
धरान उपमहानगरपालिकाअगाडि कांग्रेसको प्रदर्शन
धरान-१७ का युवासहित ८ जना समातिए
धरानमा जनता समाजवादीको विरोध